सुजिताको घटना अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी भन्छन्, बाहिरका मान्छे आएर यहाँ के गरिरहेका छन् ? हामीलाई सुजिताको परिवार भेट्न समेत दिँदैनन् – Kavrepati
Home / समाचार / सुजिताको घटना अनुसन्धान गरिरहेका प्रहरी भन्छन्, बाहिरका मान्छे आएर यहाँ के गरिरहेका छन् ? हामीलाई सुजिताको परिवार भेट्न समेत दिँदैनन्
admin July 8, 2021	समाचार Leaveacomment 108 Views
काठमाडौ । सुजिता भण्डारीको मृत्युको विषयमा अनुसन्धान गरिरहेको चितवन प्रहरीले अनुसन्धानका क्रममा आफुहरु निकै समस्यामा परेको बताएका छन् । घटना अनुसन्धानमा अवरोध सिर्जना भएको भन्दै उनीहरुले वाहिर जिल्लाका मान्छे आएर के गरिरहेका छन् ? भन्ने प्रश्न समेत गरे । सुजिता हराए देखि नै उनको परिवारसंग सम्पर्कमा रहेको बताएको प्रहरीले उनको शव फेला परेपछि वाहिरका मानिसको अनावश्यक हस्तक्षेप भएर आफुहरुलाई अनुसन्धानमै समस्या भएको बताएका छन् ।
Previous साउन १ गतेवाट नचल्ने भनिएका मोवाइल कस्ता हुन् ? प्राधिकरणले दियो जानकारी (सूचना सहित)